China 304 304L inopisa isina akakungurusa Stainless simbi ndiro kugadzira uye Factory | Huaxiao
Iko kupisa kunopisa ikozvino kwaonda se 0.78mm. pamusoro peiyo inopisa-yakakungurutswa ndiro ine hurema senge iron oxide chikero uye pitting. Iyo inopisa yakapetwa jira ine yakaderera kuomarara, nyore kugadzirisa uye yakanaka ductility. Hot-yakakungurutswa simbi machira, mechina zvivakwa zviri zvishoma kushoma pane kutonhora kugadzira, uye chechipiri kugadzira kwekugadzirisa, asi kuve nekuomarara kuri nani uye ductility.
Sino Stainless Simbi Kugona nezve 304 / 304L Hot akakungurusa Stainless simbi ndiro, 304 HRC, 304L PMP
Ukobvu: 1.2mm - 200mm
Upamhi: 600mm - 3200mm, iyo yakatetepa zvigadzirwa pls tarisa mu strip kana flat flat bar zvigadzirwa
304L Same giredhi kubva kune akasiyana nyika muyero
304L Chemical chikamu ASTM A240:
C: .00.03, Si: ≤0.75 Mn: .02.0, Kr:18.0～20.0, Ni: 8.0～12.0, S: .00.03, P: .00.045 N0.1
304L michina chivakwa ASTM A240:
Tensile simba (Mpa):> 485
Govera Simba (Mpa): 170
Kukwidziridzwa (%):> 40%
304 Chikamu chimwe chete kubva kune dzakasiyana nyika muyero
304 Chemical chikamu ASTM A240:
C：.00.08 ，Si ：≤0.75 Mn ：.02.0 ，Cr ：18.0～20.0 ，Ni ：8.0～10.5，　S ：.00.03 ，P ：.00.045 N0.1
304 michina chivakwa ASTM A240:
Tensile simba:> 515 Mpa
304L Stainless simbi
304L simbi isina simbi, inozivikanwawo seyakanyanya-yakaderera kabhoni simbi isina chinhu, chinhu chinogadziriswa simbi isina chinhu chinoshandiswa zvakanyanya kugadzira michina uye zvikamu zvinoda zvakanaka zvivakwa (ngura uye kugadzikana).
Chaicho Chasiyana nezve 304 uye 304L Hot yakakungurutswa uye Cold yakatenderedzwa tsananguro
1.Iko pamusoro peye inotonhora-yakatetepa jira ine imwe nhanho yekubwinya. Iyo inotsvedzerera kusvika pakubata uye yakafanana nekapu yakajairika yesimbi inoshandiswa kunwa mvura.
2.Kana iro rinopisa-rakamonerwa jira risina kuchekwa, rakafanana nepamusoro pemazhinji emashizha esimbi pamusika. Iko kune ngura kwakatsvuka, uye iyo isina ngura iri yepepuru-nhema (iron oxide scale).
3.Izvo zvakanakira mashandiro echando akamonera uye anopisa akakungurutswa machira ndeaya:
(1) Iyo chaiyo iri pamusoro, uye mutsauko mukukora kwechando-yakakungururwa strip simbi haipfuuri 0.01 ~ 0.03mm.
(2)Iyo saizi yakatetepa, iyo inotonhora-yakatetepa thinnest inogona kutenderedzwa netambo yesimbi ye0,001 mm; iko kupisa kunopisa ikozvino kwaonda se 0.78 mm.
(3)Iyo yepamusoro yemhando yepamusoro, uye iyo inotonhora-yakakungurutswa simbi ndiro inogona kutogadzira girazi pamusoro; nepo pamusoro peiyo inopisa-yakakungurutswa ndiro ine hurema senge iron oxide chikero uye pitting.
(4) Mahwendefa anotonhorera anotonhorera anogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi senge yakasimba tensile uye maitiro ekushambadzira senge matanho ekutsika.
Kutonhora kunotonhora uye kupisa kupisa mbiri dzakasiyana mbiri matekinoroji. Seizvo zita rinoratidzira, kutonhora kunotonhora kunoitika mune simbi pane yakasviba tembiricha. Kuoma kwesimbi iyi kwakakura. Kupisa kupisa isimbi inoitwa pakakwirira tembiricha, Inotsanangurwa:
Iyo inopisa yakapetwa jira ine yakaderera kuomarara, nyore kugadzirisa uye yakanaka ductility.
Iyo inotonhora yakatetepa jira ine yakanyanya kuomarara uye iri nyore kuita, asi haisi nyore kuremara uye ine simba rakakwira.
Iyo inopisa yakapetwa jira ine yakaderera simba, iyo yepamusoro mhando inenge yakashata (iine yakaderera oxidation uye kumeso), asi iko kwepurasitiki kwakanaka, kazhinji kwepakati uye gobvu ndiro. Cold inotenderera pepa: kukwirira kwesimba, kukwirira kuomarara, kukwirira kwepamusoro kupera, kazhinji jira rakatetepa, rinogona kushandiswa kutsika bhodhi.
Hot-yakakungurutswa simbi machira, mechina zvivakwa zviri zvishoma kushoma pane kutonhora kugadzira, uye chechipiri kugadzira kwekugadzirisa, asi kuve nekuomarara kuri nani uye ductility.
Cold-yakakungurutswa simbi jira ine imwe nhanho yebasa kuomesa, yakaderera kuomarara, asi inogona kuwana yakanaka goho reshiyo, inoshandiswa kutonhora-kukotamisa chitubu zvidimbu uye zvimwe zvikamu, uye nekuti goho poindi iri padyo neyakaoma simba, hapana njodzi panguva yekushandiswa. Kufanotarisirwa, tsaona ingangoitika kana mutoro uchidarika mutoro unobvumidzwa.
Pashure: 201 inopisa inopisa yakakunguridzirwa simbi isina waya
Zvadaro: 309 inopisa isina akakungurusa Stainless simbi yairema
Hot Yakakungurutsirwa Stainless Simbi Plate
High yepamusoro Wuxi chigayo ekisipoti SUS 304 Stainless ...